တရုတ် CFB ကျောက်မီးသွေးဘွိုင်လာစက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းပစ်ခတ် | Taishan Group မှ
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 50 အစုံ
(Fluidized အိပ်ရာဘွိုင်လာပျံ့နှံ့နေတဲ့) CFB ဘွိုင်လာကောင်းသောကျောက်မီးသွေးလိုက်လျောညီထွေ, လုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးမှာမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရေးပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါပြာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တိုးပွားလာသည့်စီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးလျော့ကျလာ, ဘိလပ်မြေ၏ admixture အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
CFB ဘွိုင်လာထိုကဲ့သို့သောပျော့ကျောက်မီးသွေး, anthracite ကျောက်မီးသွေး, ပိန်ကျောက်မီးသွေး, lignite, gangue, ရွှံ့နွံ, ရေနံ Coke, ဇီဝလောင်စာ (ထင်းသည် chip ကို, bagasse, ကောက်ရိုး, ထန်းခွံ, ဆန်ခွံ, etc) အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလောင်စာ, မီးမရှို့နိုင်ပါတယ်
CFB ဘွိုင်လာအထူးအသီးအနှံအလတ်စားနှင့် 35 440 မှတစ်တန် / နာရီနှင့် 3,82 ထံမှ MPa 9.8 မှ rated ဖိအားကနေ rated ရေငွေ့ပျံစွမ်းရည်နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ဖိအားရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်ရေပူမှ application များအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့် optimized နေကြသည်။ CFB ဘွိုင်လာ၏ဒီဇိုင်းကိုအပူထိရောက်မှု 87 ~ 90% အထိဖြစ်ပါတယ်။
1. လောင်ကျွမ်းထိရောက်မှု -99%, မြင့်သောမီးလောင်ရာနှုန်းအပူထိရောက်မှု 87% အထက် 95% အထိရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
2. စွမ်းအင်-ချွေတာရေးမြင့်မားထိရောက်မှု, လောင်စာဆီအများအပြားအမျိုးမျိုးမီးလောင်ရာကျေနပ်နိုင်သည့်လောင်စာမြင့်မားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။
3. ထုံးကြောကျ flue ရေးဆွဲဆာလဖိတ်၏ SO2 နှင့်အတူဖြစ်စဉ်ကိုရင်တွင်းစကားကိုမီးရှို့နေစဉ်အတွင်းအိပ်ရာပစ္စည်းအတွက်ကဆက်ပြောသည်နိုင်ပြီး desulphuration ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကျေနပ်နိုင်ပါတယ်
4. အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်လေတိုက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်နိမ့်သောအပူချိန်သို့မဟုတ်မီးဖို NOx ၏ရေးဆွဲရေးကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အမှန်တကယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
5. Big အကွာအဝေးဝန်ချိန်ညှိ 30-110% အထိချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ရေရှည်အတွက်အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့စီးပွားရေးအရ running 6. အမြင့်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုကြောင့်ဘွိုင်လာ။
8. အမြင့်အပူလွှဲပြောင်းထိရောက်မှု, Overload မြင့်မားစွမ်းရည်။
CFB ဘွိုင်လာကျယ်ပြန့်စက္ကူစတာတွေစက်မှုလုပ်ငန်း, အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်, အစားအစာနှင့်သောက်သုံးရေစက်မှုလုပ်ငန်း, ဆေးဝါးများစက်မှုလုပ်ငန်း, သကြားစက်ရုံ, တာယာစက်ရုံ, ဆီအုန်းစက်ရုံ, အရက်စက်ရုံ, အောင်, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပါဝါမျိုးဆက်အတွက်အသုံးပြုကြသည်
CFB ပူရေဘွိုင်လာ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ Data
ပုံစံ rated Thermal Power က (မီဂါဝပ်) rated Output ဖိအား (MPa) rated Output အပူချိန် (ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) rated Input ကိုအပူချိန် (ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) လောင်စာဆီစားသုံးမှု (ကီလိုဂရမ် / ဇ) Flue ဓါတ်ငွေ့အပူချိန် (ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) မူလတန်း Air ကိုအပူချိန် (ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) secondary Air ကိုအပူချိန် (ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) က Secondary Air ကိုမှမူလတန်း Air လေကြောင်းလိုင်း၏အချိုးအစား width
(မျိုးကွဲများအပါအဝင်။ ပလက်ဖောင်း) (မီလီမီတာ) အတိမ်အနက်
(မျိုးကွဲများအပါအဝင်။ ပလက်ဖောင်း) (မီလီမီတာ) စည် centerline ၏အမြင့် (မီလီမီတာ)
ပွောဆို 1. ဆီမှုန်ဖြစ်ပါတယ် ≤ 10 မီလီမီတာနှင့်ထုံးကျောက်အမှုန်ဖြစ်ပါတယ် ≤ 2mm ။ 2. ဒီဇိုင်းထိရောက်မှု 88% ဖြစ်ပါတယ်။
3. Desulphurization ထိရောက်မှု 90% ဖြစ်ပါတယ်။ 4. အပူထိရောက်မှုနှင့်လောင်စာသုံးစွဲမှု LHV 12670KJ / ကီလို (3026kcal / ကီလိုဂရမ်) ကတွက်ချက်ထားသည်။
ပုံစံ rated ရေငွေ့ပျံနှုန်းများစွမ်းဆောင်ရည် (t / h) rated ရေနွေးငွေ့ဖိအား (MPa) Feed ရေအပူချိန် (ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) rated ရေနွေးငွေ့အပူချိန် (ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) လောင်စာဆီစားသုံးမှု (ကီလိုဂရမ် / ဇ) Flue ဓါတ်ငွေ့အပူချိန် (ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) မူလတန်း Air ကိုအပူချိန် (ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) secondary Air ကိုအပူချိန် (ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) က Secondary Air ကိုမှမူလတန်း Air လေကြောင်းလိုင်း၏အချိုးအစား width
ပွောဆို 1. TG ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာလောင်စာအမျိုးအစားအားလုံးကိုများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။ 2. ဆီမှုန်ဖြစ်ပါတယ် ≤ 10 မီလီမီတာနှင့်ထုံးကျောက်အမှုန်ဖြစ်ပါတယ် ≤ 2mm ။
3. ဒီဇိုင်းထိရောက်မှု 88% ဖြစ်ပါတယ်။ 4. Desulphurization ထိရောက်မှု 90% ဖြစ်ပါတယ်။ 5. အပူထိရောက်မှုနှင့်လောင်စာသုံးစွဲမှု LHV 12670KJ / ကီလို (3026kcal / ကီလိုဂရမ်) ကတွက်ချက်ထားသည်။
နောက်တစ်ခု: DHL ကျောက်မီးသွေးဘွိုင်လာဖြင့်ပစ်ခတ်
ကျောက်မီးသွေး Chain ခြစ်ဘွိုင်လာဖြင့်ပစ်ခတ်
DZL ကျောက်မီးသွေး (လညျးချေါတကျောက်မီးသွေးဘွိုင်လာပစ်ခတ်) ကျယ်ပြန့်သည့်လောင်ကျွမ်းခြင်းခနျးသို့ကျွေးမွေးကြောင်းကျောက်မီးသွေးကိုမီးရှို့ခြင်းဖြင့်အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုသည်ဘွိုင်လာကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြကျောက်မီးသွေးဘွိုင်လာဖြင့်ပစ်ခတ်။ ကျောက်မီးသွေးရေနံသို့မဟုတ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဲ့သို့အခြားကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနိမ့်တဲ့ operating ကုန်ကျစရိတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောက်မီးသွေးဘွိုင်လာမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, စွမ်းအင်ချွေတာရေး, ဘက်ပေါင်းစုံထိန်းချုပ်မှု, လွယ်ကူသော installation နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံစစ်ဆင်ရေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ DZL စီးရီးကျောက်မီးသွေးဘွိုင်လာအထူးအနိမ့် p ထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းနှင့် optimized နေကြသည်ပစ်ခတ် ...
ဇီဝလောင်စာကျောက်မီးသွေးရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာဖြင့်ပစ်ခတ် , Dosh လက်မှတ်ဘွိုင်လာ , ကျောက်မီးသွေးဘွိုင်လာဖြင့်ပစ်ခတ်, Pulverized ကျောက်မီးသွေးဘွိုင်လာဖြင့်ပစ်ခတ်, ကျောက်မီးသွေးရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာဖြင့်ပစ်ခတ် , Szl Coal/Biomass Fired Boiler ၊